Wasaaradda Caafimaadka oo 25 dhaawacyo howlo daaweyn ah ugu dirtay dalka Qatar. (Sawirro) – Radio Muqdisho
Wasaaradda Caafimaadka oo kaashaneysa Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii seddexaad muddo laba bil gudahooda dalka dibaddiisa ugu dhoofisay dhaawac gaaraya illaa iyo 25 ruux oo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay weeraro iyo qaraxyo hore uga dhacay caasimadda Muqdisho oo xaaladooda caafimaad dalka wax looga qaban waayay, kuwaasi oo lagu daweyn doono Isbitaallo ku yaala dalka Qatar.
Wasiir kuxigeenka Caafimaadka Mudane Osman Mohamed Abdi ayaa uga mahadceliyay Amiirka Dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani iyo Ra’iisul wasaaraha Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khaliifa Al Thani dadaalka muuqda ee ay ku garab taagan yihiin Dowladda iyo Shacabka Soomaaliya , isagoo xusay in dhaawacyada lagu soo daweynayo dalka Qatar ay ku jiraan laba gabdhood oo Mataano ah oo isku dhegan .
Wasiir kuxigeenka Caafimaadka , waxa uu bogaadiyay kaalinta bani’aadanimo ee dadkani dhaawacyada ah ay ku daweyneyso dowladda Qatar , iyadoo Dowladaha Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Saudi Arabia ay sidoo kale ay daweynayaan dhaawacyada qaraxyo ka dhacay Muqdisho , kuwaasi oo hadda xaaladooda caafimaad ay ka soo reyneyso .
Mudane Osman Mohamed Abdi ayaa cadeeyay in Wasaaradiisu ay ku howlan tahay soo celinta adeegga iyo kaabayaasha caafimaadka dalka , si looga maarmo howlo caafimaad oo dalka dibaddiisa loogu safro .
Dhankiisa , Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta MaalgashigaMudane Ahmed Ali Mohamed (Kediye) ayaa isna ka mahadceliyay taageerada joogtada ah ee Amiirka Dowladda Qatar iyo Ra’iisul wasaarihiisa ay la garab taagan yihiin Soomaaliya , isagoo xusay in Siihayaha Safaaradda Dowladda Qatar ee Soomaaliya Eng. Hassan bin Hamza Asad Mohammed uu kaalin firfircoon oo mug leh ka qaatay fududeynta in dhaawacyadani ay helaan daryeel iyo adeeg caafimaad oo dhameystiran .
Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga, waxa uu tilmaamay in dowladda Qatar oo Soomaaliya kala dhaxeeya xiriir taariikh qotodheer oo dhinacyo badan leh ay ka mid tahay dowadaha taageerayay dalka , si uu uga kabsado dagaalo iyo colaado ammaan darro sababay.
Wasaaradda Hawlaha Guud oo Go’aamo Xasaasi ah Kasoo Saartay Shir Muqdisho Ka Dhacay (Sawirro)